Arsenal Oo Soo Iibsaneysa Xiddig Aflagaadeeyay Arsene Wenger & Talaabo Uu Isku Badbaadinayo Uu Qaaday – Laacibnet.net
Arsenal Oo Soo Iibsaneysa Xiddig Aflagaadeeyay Arsene Wenger & Talaabo Uu Isku Badbaadinayo Uu Qaaday
Goolhaye ay Arsenal dooneyso ee Runar Alex Runarsson ayaa laga doonayaa inuu dhisto sumcadiisa Emirates Stadium ka dib markii uu Arsene Wenger ku tilmaamay ‘French f**k’ qoraalo uu haatan tirtiray oo uu soo dhigay Twitter.
Xiddiga reer Iceland ayaa u muuqda mid bedelaya goolhaye Emiliano Martinez kaasoo qarka u saaran inuu heshiis 20 milyan ginni ugu wareego Aston Villa iyadoo Gunners ay u baahan tahay goolhaye u fadhiya Bernd Leno.
Runarsson ayaa loo calaamdeeyay inuu yahay ninka buuxin kara booskaas iyadoo tababaraha goolhaye ee Arsenal Inaka Cana uu kula soo shaqeeyay goolhayahaan kooxdiisa haatan ee Dijon iyadoo lagu iibsan karo kaliya 1.5 milyan ginni.
Si kastaba, taageerayaasha indhaha gorgorka leh ayaa arkay qoraalo uu Twitter soo dhigay goolhayaha Iceland markii uu da’ yaraa taasoo uu haatan Runarsson tirtiray, wuxuuna ku aflagaadeynayay tababaraha halyeeyga ah ee Arsenal.
Bishii July sannadkii 2011, goolhayaha oo u muuqday taageero careysan oo Arsenal ah ayaa Twitter ku soo qoray:
“Arsene Wenger waa yara doqon!” wuxuuna sii raaciyay hal ku dhiga “French f*ck”.
Ma cadda sababta ku dhalisay Runarsson oo markaas da’ yaraa inuu aflagaadeeyo Arsene Wenger laakiin xagaagaas waxay Arsenal iibisay Cesc Fabregas iyo Samir Nasri.
Bil ka dib, iyadoo Fabregas uu baxay islamarkaana Nasri uu qarka u saaran yahay inuu Manchester City ku biiro, Runarsson ayaa hadana Twitter ku soo qoray:
“Arsene Wenger waa ninka ugu doqonsan dunidaas!” isagoo soo raaciyay mar kale hal ku dhiga ‘French f*ck’.
Qoraalkaas waxa uu sidoo kale yimid maalin ka dib markii Arsenal ay guuldarrp 2-0 ka soo gaartay Liverpool, waxayna aheyd isbuuc ka hor inta aan Arsenal 8-2 lagu xasuuqin kulankii Old Trafford.